Travel – The Voyager
Find your inner Peace at Golden Rock ( Kyaiktiyo Pagoda-Myanmar)
( မြန်မာဘာသာ ) Around the end of rainy season, the days before Thadingyut (Festival of Lights), on first Friday of October, as soon as I reached home from office, I thought to travel somewhere to takeabreak from work pressure and Yangon urban life. Travelling is the first thing which come into my mind as […]
( English Version ) မိုးရာသီကုန်လုနီး၊ သီတင်းကျွတ်မရောက်ခင် ရက်ပိုင်းအလို၊ အောက်တိုဘာလ ပထမအပတ် တစ်ခုသော သောကြာနေ့တွင် အလုပ်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုများသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်မှာနေရတာစိတ်ပင်ပန်းမွန်းကျပ်လာသည်တစ်ကြောင်းကြောင့် ရုံးကပြန်ရောက်ရောက်ချင်း စဉ်းစားမိသည်မှာ ခရီးသွားဖို့ပင်ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားခြင်းဖြင့် စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာ၊ ငြိမ်းချမ်းရာရှာတတ်လေသူဖြစ်သဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတိုင်း ခရီးသွားဖို့ကလွဲ၍ ဘာမှမစဉ်းစားမိ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက သွားလည်စရာနေရာတွေကများသည်မို့ ဘယ်လောက်သွားသွား၊ သွားစရာနေရာကုန်သွားမှာ စိတ်ပူရန်မလို။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေသာအချိန်ရသည်မို့ နီးနီးနားနား ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲ တွေးရင်း ငယ်တုန်းကတစ်ခေါက်ရဖူးသည့် အေးချမ်းလှသော ကျိုက်ထီးရိုးကိုပြေးမြင်မိသည်။ သွားမည့်နေရာသာတွေး၍ မနက်စောစောထရန် နှိုးစက်ကို မနက် ၃ နာရီပေးထားပြီးအိပ်ယာဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မနက် ၃နာရီထ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်စုံတစ်စုံဝတ်၊ မြန်မာဝတ်စုံတစ်စုံ၊ ညအိပ်ဝတ်စုံတစ်စုံ၊ သဘက်တစ်ထည်နှင့် အနွေးထည်တစ်ထည်ကို ဘေးလွယ်အိတ်ထဲကောက်ထည့်ကာ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်သို့ Taxi ငှား၍ထွက်လာခဲ့လေသည်။ အောင်မင်္ဂလာသို့ရောက်ပြီးနောက် လက်မှတ်ဝယ်ရန် ဟိုလိုက်ကြည့် […]
Taj Mahal : Architectural Marvel
( မြန်မာဘာသာ ) Around the end of winter and starting of summer, on my second day in India, I visited one of the world’s most famous landmarks and symbol of India “The Taj Mahal”. I was asleep on the way to Agra from Delhi because I was so tired of5hours flight from Myanmar to […]
အံ့ဖွယ် ဗိသုကာ တာ့ဂ်ျမဟာ
( English Version ) ဆောင်းအကုန်နွေအကူးကာလ၊ အိန္ဒိယမြေကိုခြေချပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတင် ကမ္ဘာမှာအထင်ကရကျော်ကြားလှတဲ့ အိန္ဒိယရဲ့သင်္ကေတ တာ့ဂ်ျမဟာ (Taj Mahal) ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ မြန်မာ့မြေမှဒေလီသို့အလာ ၅နာရီကြာလေယာဉ်ခရီးကြောင့် ခရီးပန်းနေသောကိုယ့်ခမျာ ဒေလီ (Delhi) မှ တာ့ဂ်ျမဟာရှိရာ အာဂရာမြို့သို့အသွားလမ်းခရီးမှာ တစ်လမ်းလုံးအိပ်ပျော်ကာလိုက်ပါခဲ့လေသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ အာဂရာမြို့ (Agra)၊ ယမုံနာ (Yamuna) မြစ်ကမ်းဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ တာ့ဂ်ျမဟာကိုရောက်ရန် ဒေလီမှ ကားဖြင့် အသွား ၄နာရီခန့်ကြာမြင့်ပေသည်။ အာဂရာမြို့ကိုစရောက်ရောက်ချင်း ဘယ်မှမသွားခင် အသိတစ်ယောက်အိမ်သို့ခဏဝင်လည်ဖြစ်သည်။ ဖော်ရွေလှသော အသိလင်မယားက အာလူးကတ်သလိတ်ကြော်နှင့် လက်ဖက်ရည်ကို မနက်စာအဖြစ်တည်ခင်းဧည့်ခံလေသည်။ အာလူးကတ်သလိတ်ကြော်မှာ အစာသွတ်မပါဘဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစားမြိန်လှပေသည်။ လက်ဖက်ရည်ကတော့ နွားနို့များများ သကြားနည်းနည်းနှင့် အရည်ကျဲကျဲဖြစ်သဖြင့် ရန်ကုန်က သောက်နေကျလက်ဖက်ရည်နှင့်မတူ အရသာမရှိ ပေါ့ရွတ်ရွှတ်ကြီးဖြစ်နေသည်။ သကြားနှစ်စွန်းခန့်ထပ်ထည့်မှ သောက်ရတာအရသာလေးလေးပင်ပင်ရှိပေတော့သည်။ မနက်စာစား၊ […]